Kooxda Dekadda oo Guusheedii ugu weyneyd ka gaartay Madbacadda | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA SOMALIDA - Kooxda Dekadda oo Guusheedii ugu weyneyd ka gaartay Madbacadda
Kooxda Dekadda oo Guusheedii ugu weyneyd ka gaartay Madbacadda
Kooxda Dekadda ayaa kaligeed ku noqotay hoggaanka horyaalka Dalka, ka gadaal markii ay guul goolal badan ka gaartay naadiga Madbacadda ciyaar aad u xiiso badan oo Galabta lagu ciyaaray garoonka Koonis.
Feysal Xaashi ayaa dhaliyay goolka Furitaanka, Maxamed Xasan, ayaana raacsaday goolka labaad ee kulanka, Madbacadda waxaa gool usoo celiyay Cabdisalaan Maxamed Cabdi, waxaana Qeybta koobaad lagu kala Maray 2-1.
Feysal Xaashi, ayaa kulanka ka dhigay 3-1, ka hor Maxamed Xasan Goolkiisa Labaad inta uusan ka dhalin ciyaarta, Feysal Xasan Xaashi ayaa dhammeystiray goolashiisa 3-leyda ee kulankaas.
Maxamed Xasan ayaa isaguna dhaliyay goolkiisa 3-aad ee ciyaarta, waxaana dhaliska kulankaas soo xiray Feysal Xasan Xaashi oo ciyaartaas ka dhaliyay 4 gool, halka seddaxna uu dhaliyay Maxamed Xasan.
Dekadda ayaa hadda hoggaanka ku fadhisa, waxayna iyadoo guusheeda ku damaashaadeysa berri daawan doonaan kooxaha Horseed iyo Heegan ee ciidanka Dalka, iyadoo ciyaartaas ay tahay mid ka mid ah Naadiyada ugu xoogga badan.
Horseed ayaa haddii ay badiso noqon doonta mid hoggaanka kula midowda kooxda Dekadda in kastoo markaasna faraqa goolasha looga sarreyn doono haddii aysan dhalin wax ka badan 4 gool oo Nadiif ah.